एक वडाअध्यक्ष : जसले प्रचार नगरी जनताको काममा लगाए आफ्नो तलब !
६०१५ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ श्रावण १० , ०९:१२ बजे
– मदन गिरी
महेन्द्रनगर, १० साउन । सामाजिक सञ्जालको युगमा आफूले गदै नगरेका काम पनि प्रचार गर्ने चलन छ । चिनेको पत्रकार भए त सानो काम पनि ठूलो बनाउन सक्नेहरु धेरै छन् । स्थानीय तहमा सरकार बनेपछि फेसबुक र ट्वीटर चलाउन जान्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रचार आफै गर्छन् र खोजीखोजी पत्रकार भेटेर चर्चा बटुल्ने कोसिस गर्छन् ।
तर, चर्चा कमाउने उद्देश्यविनै काम गर्ने जनप्रतिनिधिको पनि कमी छैन, यो समाजमा । काम गर्ने तर चर्चाका लागि नदगुर्ने एक जनप्रतिनिध हुन्, ध्वजबहादुर विष्ट । भीमदत्त– ८ का वडाअध्यक्ष विष्टले वितेको वर्ष आफ्नै लगानीमा थुप्रै काम गरे तर प्रचार गरेनन् । न त उनको कामको चर्चा सुनेर पत्रकारहरुले नै रुचि देखाए । तर पनि उनी काम गरिरहेका छन् ।
वडाअध्यक्ष विष्ट अहिले गत आर्थिक वर्षमा आफूले पाएको तलबबाट चौतारो बनाउन बनाउन व्यस्त छन् । विष्टले तिलाचौरको शान्ति टोल स्थित भम्केनी धाम मार्गमा आफूले वडाअध्यक्ष भएवापत पाएको पूरै रकम खर्च गरेर चौतारो निर्माण सुरु गरेका छन् ।
करिब एक कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भईरहेको चौताराका लागि उनले आफूले पाएको करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब खर्च गरेर चौतारो बनाइरहेका छन् । भम्केनीधाम जाने धार्मिक मार्ग भएकाले भक्तजनहरुलाई विश्राम तथा शान्ति टोलवासीको भेटघाट केन्द्र बनाउने उद्देश्यका साथ चौतारा निर्माण गर्न लागेको वडाअध्यक्ष विष्टको भनाई छ ।
निर्वाचित भएपछि जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित हुनुपर्ने बताउदैँ वडाअध्यक्ष विष्टले भने, ‘हामी जनसेवक हौं, पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका छौँ, त्यसैले कर्मचारी जस्तै तलब खानु उचित होईन ।’
तलब मात्रै होइन उनले आफ्नो लगानीमा वडाका अरु काम पनि गर्दै आएका छन् । उनले नगरपालिकाबाट एक पैसा पनि नलिई बाँसका सामग्री बनाउन तालिम सञ्चालन गरेका छन् । आफ्नो वडामा मात्रै नभई उनले ९ नम्बर वडामा पनि आफ्नो खल्तीबाट ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर आयमूलक तालिम आयोजना गरेका छन् । विभिन्न विकास निर्माण र आय मूलक तालिमका लागि बितेको एक वर्षमा आफूले निजी प्रयासमा ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताएका छन् ।
वडाअध्यक्ष विष्टले दुई ट्रयाक्टर र भुसा भुट्टाबाट हुने आम्दानीबाट घर खर्च चलाउँदै आएका छन् । त्यसैको कमाईबाट बचेको रकमले उनले जनताका लागि काम गर्दै आएका छन् ।
लिलाममा सर्वस्व गुमाएका गरिबसँग कुमारी बैंकको यस्तो दादागिरी !
कञ्चनपुर प्रहरी एक्सनमा, जनविश्वास फर्काउने काम गर्दै
कुमारी बैंकले यसरी उठिबास गरायो गरिबको !
भित्रभित्रै लिलाम माफिया सक्रिय : कृषि विकास बैंकका म्यानेजरको यस्तो चर्तिकला !
निर्मला हत्याकाण्ड र म विरुद्ध अदालती–मुद्दाका चाङको अर्थ : खेम भण्डारी
निर्मला हत्याकाण्ड : अदालतले दिएको संकेत